Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 23)
Ahoana ny fomba ahazoana mampifangaro an'i Outlook amin'ny Android
Avy eo aho manazava ny fomba fampifanarahana ny Outlook amin'ny Android fa tsy ho faty manandrana.
Misintoma fampiharana avy amin'ny Google Play nefa tsy manana kaonty Google miaraka amin'ny APK Downloader
Niezaka mafy i Google mba hampiasan'ny olona ny vokariny, ary tsy afaka miaina izy ireo raha tsy manana kaonty Gmail akory. Ary tamin'ny lafiny iray dia nahomby izy io, nanomboka androany tsy misy amintsika afaka miaina raha tsy misy ny motera fikarohana an'i Giant Google. Na izany aza, mbola misy antsipiriany azo sorohina. Ohatra, rehefa mankany amin'ny magazay ianao ary manandrana mitsapa ny takelaka tianao hovidiana. Fa misy inona? Raha te hahafantatra ny lalao misy eo amin'io takelaka io ianao dia tsy maintsy manana ny fahasahiananao hametraka ny kaonty gmail anao amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ao amin'io magazay io, ary vao mainka aza hadinoina ny manadino anao hiala aoriana. Na mamorona kaonty vaovao. Noho io antony io sy antony maro hafa, androany dia miresaka vahaolana mahafinaritra izahay: APK Downloader.
[APK] Router Keygen na ny fomba fananana Internet maimaim-poana amin'ny Android
Router Keygen dia rindranasa iray izay hanampy antsika hanana Internet maimaim-poana amin'ny Android. Ity ny rohy hampidinana ny apk.
Play Music mamadika an'i Chrome ho mpilalao mozika
Avy amin'ny Google Play Music dia manana lahasa fanandramana izy io ahafahantsika manova ny Google Chrome ho mpilalao mozika.
Twitter for Android dia ahafahanao manisy marika ny mpampiasa amin'ny sary ary mampakatra marobe miaraka amin'izay ao amin'ilay kinova vaovao
Seho vaovao roa manan-danja ao amin'ny kinova Twitter ho an'ny Android vaovao, toy ny fampidinana sary marobe sy ny mety hisian'ny tagan'ny mpampiasa.
Ahoana ny fomba hamoronana lisitra fampielezam-peo vaovao amin'ny WhatsApp ary inona no ilana azy?
Dia avelako ho anao ny dingana rehetra hanarahana anao hamoronana lisitra fizarana vaovao amin'ny WhatsApp sy izay hanompoany anay.
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho lasa Sony Xperia Z2
Eto ianao manana mod hamadika ny Android ho Sony Xperia Z2.
[APK] Mix Radio ho an'ny Nokia X ho an'ny Android 4.1.2 rehetra na avo kokoa
Eto aho avelako ianao hisintona mivantana ny apk Nokia Mix Radio, fampiharana tsy mampino izay manan-kery ho an'ny terminal Android hafa.
Ahoana ny fomba hijerena Sevilla - Real Madrid maimaim-poana amin'ny Android anao manokana miaraka amin'i Roja Directa
Avy eo manazava ny fomba hijerena Sevilla - Real Madrid maimaim-poana aho izay milalao anio alina amin'ny alàlan'ny fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android: Androany Fintonic
Fintonic dia mpanolo-tsaina ara-bola an'ny Android izay hanampy antsika hahay hifehy ny volam-pianakaviantsika amin'ny alàlan'ny fandaminana izany sy ny fanolorana torohevitra amin'ny fotoana tena izy.
BlinkFeed Launcher an'ny HTC One azo alaina amin'ny Android rehetra
Eto ianao dia manana ny fomba hizaha toetra ilay Launcher malaza amin'ny laharana HTC One amin'ny terminal Android rehetra, ny BlinkFeed Launcher dia azo alaina amin'ny terminal rehetra izao.
Fampiharana Android mahatalanjona: Mpandefa torolàlana amin'ny rantsan-tànana anio
Finger Shorcut Launcher dia Launcher manaitra ho an'ny Android izay mampiasa teknolojia fihetsika hiantsoana fampiharana haingana sy mahomby.
Angry Birds GO! havaozina miaraka amin'ny Sub Zero, toko mangatsiaka
Rovio dia mandefa ny Sub Zero, toko voalohany azo sintonina ho an'ny Angry Birds GO! izany dia hitarika antsika ho amin'ny lanezy.
[APK] Sintomy ny kinova farany azo alaina ao amin'ny Google Play Store
Eto aho avelako anao mivantana ny apk ny kinova farany azo avy amin'ny Android Play Store.
Sokajy vaovao ao amin'ny Play Store hampahafantarana ny fampiharana ny developer isaky ny firenena
Google dia manandrana sokajy vaovao ao amin'ny Play Store mba hampisehoana ireo rindranasa noforonin'ireo mpamorona araka ny faritra misy antsika.
Ahoana ny fomba hijerena an'i Madrid-Barça amin'ny Internet fa tsy ho faty raha manandrana
Eto ianao dia manana fomba ara-dalàna tanteraka hijerena ny lalao Madrid-Barça amin'ny finday Android Tablet na Tablet anay ary maimaim-poana tanteraka.
[APK] Sintomy ny kinova farany an'ny Hangouts misy
Eto ianao manana ny kinova farany azo alaina amin'ny Hangouts sy Google Play Services mivantana amin'ny endrika APK ho an'ny fametrahana manual.
Tiny Thief dia mahazo toko vaovao ary mandeha amin'ny lalao maimaimpoana
Ny asa manaitra an'ny vitsika 5 dia mahazo toko vaovao, Bewitched, ary mandeha maimaimpoana amin'ny lalao 2.
Andramo ireo rindranasa natolotry ny Samsung Galaxy S5 avy amin'ny Android anao manokana
Eto ianao manana ity fampiharana maimaimpoana ity izay tian'i Samsung hivarotra anay ireo tombony miafina an'ny Samsung Galaxy S5.
Telegram ho an'ny Android dia nohavaozina amin'ny kinova 1.4.0 ary ankehitriny mamela ny feo naoty
Izahay dia efa manana ny kinova Telegram ho an'ny Android vaovao miaraka amin'ny endrika Voice Memos efa nandrasana hatry ny ela.
Ankehitriny Browser dia mpizaha tranonkala ho an'ny Android miaraka amin'ny fanohanana Flash
Tsy dia misy mpizaha tranonkala be dia be izay manome fanohanana Flash, noho izany ity Browser Now vaovao ity dia ho safidy tsara hafa.
SDFix dia mamela ny mpampiasa KitKat hamerina hifehy ny karatra SD
Noteren'i Google fameperana sasantsasany ny karatra SD ao amin'ny Android 4.4 KitKat, ary miaraka amin'ity fampiharana SDFix ity dia hahafahantsika mifehy indray.
Fampiharana maimaim-poana 3 hanatsarana ny fahombiazan'ny Android
Raha tsy mandeha araka ny itiavanao na very ny hafainganana ny findainao, dia manolotra fampiharana 3 maimaimpoana anao izahay anio hanatsarana ny fahombiazany amin'ny Android.
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany Tango
Raha omaly no nolazaiko anao ny momba an'i Tango sy vola fampiasam-bola an-tapitrisany voarainy, rehefa nosedraiko izany tamin'ny terminal Android -ko dia tsy nahatohitra ny fanolorana ilay app aho.
MarkAsRead ho an'ny Gmail dia mametraka kisary iray hanamarihana fa vakiana ao amin'ny fampandrenesana Gmail
Avy amin'ny bara fampandrenesana, miaraka amin'ny MarkAsRead ho an'ny Gmail dia azonao atao ny manisy marika ny mailaka Gmail rehefa novakiana.
Tango ho an'ny Android dia miakatra avy amin'ny lavenony toa an'i Phoenix
Mahazo ny vaovao momba ny fampiasam-bola lehibe ao Tango ho an'ny Android izahay avy amin'ny vondrona orinasa sinoa izay alibaba.com no sinoa Amazon
Ny mpanampy tsara indrindra ho an'ny Android dia efa napetraka ho toy ny mahazatra ary antsoina hoe Google Search na Google Now
Ireto ny baiko be mpampiasa hampiasana ao amin'ny Google Now.
Azonao atao izao ny manandrana ny Android Wear amin'ny terminal Android anao [Download APK]
Ny Android Wear launcher APK dia misy ankehitriny ho anao hizaha toetra ny dikan'ny hoe manao smartwatch amin'ny tananao.
Ahoana ny fomba fiasan'ny WhatsApp?
Na dia ny fampiharana fandefasan-kafatra aza dia tsara indrindra, androany dia lazainay aminao amin'ny fomba tsotra ny fomba fiasan'ny WhatsApp ao anatiny handefasanao ny hafatrao.
[APK] Google Keyboard dia nohavaozina amin'ny kinova 3.0 misy fanatsarana maro
Eto ianao manana ny kinova farany an'ny keyboard Google na Google Keyboard mivantana amin'ny apk ho fanavaozana mandeha ho azy.
Facebook dia mizaha bara fampandrenesana maharitra maharitra miaraka amin'ny sary piraofilina
Ao amin'ny bara fampandrenesana, ny iray amin'ny Facebook mihitsy dia afaka miara-miaina amin'ny hitsin-dàlana ao anatin'izany ny sary misy ny mombamomba azy.
Misy karatra fanomezana Google Play ankehitriny any Espana
Na dia efa tany amin'ny firenen-kafa efa ela aza izy ireo dia efa misy ny karatra fanomezana Google Play any Espana hividy ao amin'ny magazay Fnac.
Google Search dia nohavaozina miaraka amin'ny baikon'ny feo «Makà sary» ary «Mirakitra horonantsary»
Google Search dia manana baiko vaovao roa handefasana ny fangatahana fakantsary toy ny "Makà sary" sy ny "Raketo horonan-tsary"
E-ANBAI no vaovao avy amin'i Yuji Kana, mpamorona ny hedgehog manga angano, Sonic.
Azo zahana any Espana izao i Chromecast hanolotra anay ny fahafahan'ny filalaovana atiny multimedia amin'ny fahitalavitra.
Kitendry Android 3 no tokony hozahanao raha tsy maharesy lahatra anao ny anao
Angamba raha ianao dia iray amin'ireo izay mitady traikefa mihoatra ny iray izay tonga amin'ny toerana misy anao amin'ny Android, dia ho tianao ireo kitendry Android 3 arosonay ireto.
Mpandefa 4 ho an'ny Android izay ho tianao
Ao amin'ny fizarana fanabeazana anay ho an'ireo vao teraka dia niresaka momba azy ireo izahay, ary hanohy handroso amin'ity tranga ity dia mitondra 4 Android launcher ho tianao izahay.
Mpanonta sary telo tsy mahazatra sy maimaim-poana ho an'ny Android
Androany dia manohy mampiseho fampiharana anao izahay hanararaotana ny terminal Android anao, ary amin'ity tranga ity dia miloka amin'ny mpampanonta sary 3 tsy mahazatra izahay.
Alien Ride, Skrillex dia miditra amin'ny tontolon'ny lalao video
Alien Ride no lalao ahafahantsika mihaino ny hiran'ny Recess, ilay rakikira Skrillex vaovao.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, Androany dodol Locker
Dodol Locker dia safidy iray hanambatra amin'ny dodol Launcher ary ahafahantsika manova tanteraka ny interface ny efijery hidin-trano.
Ny GPS tsara indrindra ho an'ny Android, Androany eny an-dàlana
Be-On-Road dia GPS ho an'ny Android izay ahafahantsika manasongadina fiasa vaovao maro toy ny maha-manokana ny fanamboarana azy ho an'ny kamio.
Ny CEO an'ny WhatsApp dia miantoka fa ny fifanarahana amin'ny Facebook dia tsy hanimba ny fanajana ny fiainana manokana
Nipoitra ny tabataba taorian'ny nahazoan'ny Facebook WhatsApp. Ankehitriny dia ny CEO izay tonga eo am-piandrasana ny fahaleovany tena amin'ny tambajotra sosialy.
Mandraisa anjara amin'ny programa beta ho an'ny daholobe Facebook Messenger
Atorinay anao ny fomba fandraisana anjara amin'ny programa beta ho an'ny daholobe Facebook Messenger.
Ho mora kokoa ny mahita lalao video misy karazana miaraka amin'ireo sokajy 18 vaovao amin'ny Google Play Games.
Genius Scan no mety ho fampiharana tsara indrindra amin'ny karazany Android ho an'ny Android noho ny fahatsorany sy ny haitao mahery vaika ananany hijerena sary.
Lalao ho an'ny mpihaino rehetra, androany Sprinkle Free
Sprinkle Free dia lalao maimaim-poana ho an'ny Android miorina amin'ny fizika rano ary atolotra ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Iray amin'ireo lalao tena ilaina.
Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android, Androany dodol Launcher - haingon-trano
Dodol Launcher dia rindrambaiko tsy mampino ho an'ny Android izay hanova tanteraka ny fomban'ny interface na desktop lehibe amin'ny terminal Android-nay
Misy kinova beta vaovao an'ny WhatsApp 2.11.193 azo alaina ao amin'ny tranonkalanao
Eto aho mitondra anao WhatsApp kinova vaovao hafa, amin'ity andiany 2.11.193 ity dia mbola amin'ny kinova beta.
Ahoana ny fandefasana mozika amin'ny fitaovana Android?
Raha efa nanontany tena ianao hoe ahoana no ahazoanao tombony betsaka amin'ny terminal Android anao sy ny mozika, androany aho dia manazava ny fomba fihainoana mozika mivantana amin'ny fitaovana Android.
Fitaovana ilaina amin'ny Android, androany Waze Up - Waze eo ambony
Waze Up - Waze on Top dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny Android izay tena ilaina amin'ny mpampiasa Waze rehetra.
Crazy Taxi vaovao no ho tonga amin'ny Android
Kenji Kanno sy SEGA dia nanambara ny fanombohana ny Crazy Taxi: City Rush tamin'ny faran'ny taona.
Fampiharana 5 hijerena sy hisintomana horonan-tsary amin'ny Android-nao
Raha iray amin'ireo mampiasa ny terminal Android anao hijerena horonan-tsary ianao dia mila mijery ireo rindranasa feno indrindra ho azy ireo.
Sintomy ny kinova farany azo alaina ao amin'ny Play Store, v 4.6.16 miaraka amin'ny fanatsarana maro
Avelanay mivantana aminao ny apk ho fisintomana mivantana sy fametrahana ny kinova farany azo avy amin'ny Google Play Store
Sintomy ny fampiharana manokana an'ny Samsung Galaxy S5
Avelanay eto aminao ny apk an'ny fampiharana manokana an'ny Samsung Galaxy S5 ho fampidinana mivantana azy ireo ary fametrahana amin'ny maodely Samsung hafa.
Ny fampiharana Android alaina indrindra ary tokony hanananao amin'ny findainao
Raha tianao ny filaharana, anio dia entinay anao ny iray amin'ireo fampiharana Android alaina indrindra ary tokony hanananao amin'ny findainao raha tsy te hivoaka ianao.
[APK] Sintomy ny kinova You Tube ho an'ny Android misy fanatsarana maro
Eto aho mamela anao mivantana ny apk You Tube for Android amin'ny kinova farany nohavaozina noho ny lehilahy avy amin'ny Android Police.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, Siri anio ho an'ny Android
Siri for Android dia rindrambaiko tsy mampino ho an'ny mpanampy feo Android karazana izay tsy tokony hialona ny fampiharana Apple tera-tany.
Ny fampiharana fandefasana hafatra mivantana eo no ho eo
Mampitahainay ny hery sy ny fahalemen'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra toy ny: Telegram, BBM, Hangouts ary WhatsApp.
Fampiharana Android mahatalanjona, Androany Glimmer
Glimmer dia fampiharana ny karazana famantaranandro fanairana fa tsy mitovy amin'ny hitanao hatreto amin'ny Android, nohamarinina ho an'ny fifohazana voajanahary.
Ny Instagram dia havaozina miaraka amina mpampiasa interface miaraka amin'ny endrika Android
Instagram no tambajotram-pifandraisana malaza indrindra eto an-tany ary manavao ny rindrambaiko android miaraka amina mpampiasa vaovao.
Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android, Androany fitendry Android misy fampiasa fanampiny maro
Ny kitendry atolotray anao anio amin'ny fampiharana tsy mampino ho an'ny Android dia feno fampiasa tahaka ireo hitantsika amin'ny kitendry PC.
Ampidiro ny Nokia X Launcher amin'ny Android rehetra
Eto ianao dia manana Launcher antsoina hoe Launcher 7 izay hanome antsika ny fisehoana feno ny interface izay ampiasaina ao amin'ny faran'ny Nokia X sy ny terminal Windows Phone.
Tema Xperia ho an'ny smartphone Sony amin'ny Android 4.3 na avo kokoa
Azo jerena izao ny Xperia Xperia raha manana telefaona Sony misy Android 4.3 na avo kokoa ianao.
Android Manager hahafehy ny Android anao amin'ny Windows PC, Linux ary Mac
Eto ianao dia manana vahaolana mahaliana hifehy ny Android-nao amin'ny solosainanao manokana. Android Manager no anarany.
Eto aho mamela anao misaotra ny forum XDA ny fampiharana teratany terminal HTC, fonosana HTC Music hapetraka amin'ny Android rehetra.
Royal Revolt 2, toeram-piadiana marobe
Royal Revolt 2 dia manambatra ny paikady sy ny fiarovana ny tilikambo.
Fampiharana Android vaovao, Androany Fenix ​​ho an'ny Twitter
Fenix ​​ho an'ny Twitter dia mpanjifa Twitter vaovao izay, na dia ao anatin'ny dingana beta na fivoarana feno aza izy, dia mampanantena safidy tsara maro ho an'ny Twitter.
Whatsapp 2.11.186 azo alaina ao amin'ny Play Store
Misy kinova vaovao WhatsApp iray hafa izay hita ao amin'ny magazay fampiharana Android, ny Play Store miaraka amin'ny kinova 2.11.186
Azo alaina ao amin'ny Play Store i Cyberlink's PhotoDirector
PhotoDirector no tonian-dahatsoratry ny sary avy amin'ny Cyberlink, mpamorona PowerDVD, izay mankany Android fotsiny ho an'ny takelaka.
Ampidiro ny mpandefa NOKIA X nefa tsy ho Root
Ampidiro ny mpandefa Nokia X amin'ny fitaovana misy Android JB na avo kokoa nefa tsy miorim-paka.
Ahoana ny fametrahana ny fiasa Xperia Z2 Smart Call amin'ny Xperia Z1 sy Z1 Compact
Androany dia asehoko anao ny fomba fametrahana ity fiasa vaovao an'ny Xperia Z2 antsoina hoe Smart Call ao amin'ny Xperia Z1 sy Xperia Z1 Compact ity
Avadiho ho Nintendo DS, NDS ny Android anao
Androany aho dia mampianatra anao ny fomba hamadihana ny Android ho lasa console amin'ny finday Nintendo, ny Nintendo DS na NDS.
Sintomy mivantana avy amin'ny tranokalany ny kinova farany azo alaina an'ny WhatsApp
Eto aho dia avelako ny fomba anananao ny kinova farany an'ny WhatsApp alohan'ny tsy misy azy ao amin'ny Android Play Store.
Avadiho ho lasa PSP ny terminal Android anao
Amin'ity lahatsoratra ity aho dia manazava tsikelikely ny fomba hamadihana ireo terminal Android ho PSP matanjaka.
Tsingerintaona Google Play: Sintomy maimaim-poana ny sarimihetsika Tom Hanks
Google Play hankalazana ny tsingerintaonany dia manome anao mandritra ny fotoana voafetra ilay sarimihetsika BIG 80, miaraka amin'i Tom Hanks.
Fing - Fitaovana amin'ny tambajotra dia ahafahantsika mahafantatra amin'ny antsipiriany izay mampiasa ny tambajotra WiFi misy antsika
Fing - Network Tools dia maimaim-poana ary mamela anao hahafantatra amin'ny antsipiriany izay mampiasa ny tamba-jotra WiFi.
Blimps, Dialer mitsingevana manana safidy tena mahaliana
Androany aho te-hanolotra anao Blimps, Dialer mitsingevana ho an'ny android izay mampanantena fiasa mahaliana ho an'ireo fitaovantsika Android.
Ny fikorontanan'ny WhatsApp miaraka amin'ireo fanavaozam-baovao avy amin'ny Google Play sy ilay fampiharana mihitsy
WhatsApp dia teo am-bavan'ny tsirairay tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ary gaga fa nahazo azy io ny Facebook noho ny endrika mampientanentana azy.
Fampiharana Android mahatalanjona, fanamafisana bateria ankehitriny
Androany dia te hampiditra ao anaty katalaogin'ny fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, Calibration bateria ho an'ny fampiasana lehibe amin'ny fikojakojana bateria aho.
Sintomy mivantana amin'ny apk ny tsimbadika farany Google Play Music
Ity ny rohy mivantana hampidinana ny apk ny kinova Google Play Music ho an'ny Android farany.
Inona no atao hoe .apk ary ahoana ny fampiasana azy?
Manohy ny fizarana Tutorial ho an'ny zaza vao teraka izahay ary amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny fametrahana rindranasa ao anaty bilaogy Android amin'ny .apk izahay
Fakan-tsary Sony Xperia Z2 ampitaina amin'ny fitaovana Xperia hafa
Raha manana fitaovana Xperia ianao dia azonao atao ny mametraka ny fakantsary ampitaina avy amin'ny fanolorana Xperia Z2 ankoatry ny famafazana hafa.
Flipboard dia manampy safidy ao amin'ilay kinova vaovao hidiranao amin'ny Google+
Koa satria ity kinova vaovao ity dia afaka miditra ao amin'ny Flipboard miaraka amin'i Google+ ianao, manamora ny zavatra rehefa mampiasa fitaovana maro.
Mailbe.at, mpanjifa mailaka mahavariana ho an'ny Android
Maibe.at dia mpanjifa mailaka tena izy hitantanana ny kaontinay amin'ny fomba hafa amin'ny terminal Android anay.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, Androany Paint Joy - Color & Draw
Paint Joy - Color & Draw dia fampiharana manaitra sy tsy mampino ho an'ny karazana Android Paint anao ary maimaim-poana tanteraka.
Zahao hoe iza no milalao ao amin'ny faribolanao miaraka amin'ny Google Play Games v1.5 [Download APK]
Ny kinova vaovao amin'ny Google Play Games dia manolotra, ankoatry ny zavatra hafa, ny fahafantarana hoe iza no milalao ao amin'ny faribolanao.
Google manavao ny Text-To-Speech (TTS) miaraka amina feo famaritana avo sy bebe kokoa [Download APK]
Ny kinova vaovao an'ny Text-To-Speech TTS dia mitondra feo avo famaritana, fanatsarana UI ary fanohanana ireo fiteny vaovao.
Webogram no fanitarana na fangatahana Chrome ahafahantsika mampiasa Telegram avy amin'ny tranokala Google.
Fampiharana Android 5 hanararaotana ny YouTube
Raha manambara ny tenanao ianao fa mpankafy ny tranokala atiny misy horonantsary lehibe indrindra, anio dia asehonay anao ny lisitry ny rindranasa Android 5 hanararaotana ny YouTube.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, Androany haingana ho an'ny Facebook
Fast For Facebook dia fampiharana hifehy ny Facebook amin'ny fomba tsy ofisialy ary misy safidy sy fomba fijery maro hafa noho ny fampiharana voalohany.
Fampahalalam-baovao Sony's Socialife azo zahana amin'ny rehetra ao amin'ny Play Store
Socialife dia fampiharana an'i Sony manokana hamaky vaovao izay natomboka androany tao amin'ny Play Store.
[PORT] Nokia Email azo alaina amin'ny fitaovana Android hafa
Eto ianao dia manana PORT vaovao an'ny fampiharana teratany an'ny andiany Nokia X, amin'ity indray mitoraka ity ny fampiharana Nokia Email ho an'ny Android rehetra.
Sintomy ary apetaho ny Google Keyboard amin'ny alàlan'ny laharana fahadimy
Eto dia manana ny Google Keyboard ianao, ny kitendry teratany Google fa manana ny laharana fahadimy nomena.
Fampiharana Android mahatalanjona, manome aingam-panahy androany
Inspire Launcher dia mpandefa maimaim-poana ho an'ny Android 4.2 izay manome antsika fiainana Kit Kat na dia misy asany manokana toa ny Genius Bar aza.
[Port] Nokia Music Player ilay mpilalao mozika andiany Nokia X
Avelanay eto aminao ny APK iray amin'ireo fampiharana teratany an'ny laharana Nokia X miaraka amin'ny Android, amin'ity indray mitoraka ity dia mpilalao mozika teratany.
Manana ny safidy tsara indrindra amin'ny WhatsApp amin'ny findainao ianao ary Google Hangouts no iantsoana azy
Hangouts dia iray amin'ireo rindranasa tafiditra anaty saika amin'ny Android rehetra sy ny mpisolo toerana voajanahary an'ny WhatsApp.
Google URL hanafohezana hanafohezana URL misy ao amin'ny Play Store ankehitriny
Ny fampiharana Google URL Shortener izay manafoana ireo URL ao amin'ny terminal Android anao dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny mba hisintonana.
Fampiharana Android mahatalanjona, tahan'ny fo ankehitriny
Ny tahan'ny fo Runtastic dia hamela antsika, amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny terminal Android antsika, hahafahana mifehy ny fitepon'ny fontsika.
Sintomy ny fampiharana Nokia X manokana amin'ny Android-nao
Fantaro ary ampidino ireo fampiharana manokana ho an'ny Nokia X amin'ny Android rehetra.
[PORT] Ampidino ny apk an'ny browser Nokia X ho an'ny Android
Eto ianao manana ny APK an'ny mpizaha ny zotram-piaramanidina Android X an'ny terminal Android hapetraka amin'ny Android rehetra.
Ahoana ny fomba hamoronana sary mitambatra misy sary kely misy sary hafa amin'ny Android fotsiny
Androany aho dia manazava tsikelikely ny fomba famoronana sary amina sary miorina amin'ny sary piraofilina na sary hafa avy amin'ny Android.
Azonao atao ny manafina ny fampandrenesana ataon'ny vondrona ao amin'ny WhatsApp
WhatsApp tamin'ny fanavaozana farany nampifangaro ny safidy hampanginana ny fampandrenesana ataon'ny vondrona. Safidy izay notadiavin'ny maro.
Google+ dia mandray kinova vaovao amin'ny fanontana amin'ny alàlan'ny fitaovana samihafa sy maro hafa
Andianteny vaovao an'ny Google+ izay ahafahanao manova sary amin'ny alàlan'ny fitaovana samihafa ho fisongadanan'ity fanavaozana vaovao ity.
Google mandefa ny Google Now Launcher mankany amin'ny Play Store [APK Download]
Ny Google Now Launcher dia azo alaina ao amin'ny Play Store ihany rehefa avy nomena anarana tamin'ny fanavaozana ny Fikarohana Google farany.
Mad Skills Motocross 2 dia saika tsara toa ilay tranofiara
Turborilla dia namoaka vao haingana Mad Skills Motocross 2, niaraka tamina tranofiara matanjaka.
Fanitarana mba hamerenana amin'ny laoniny ny endriny taloha an'ny New Chrome Tab
Ny kinova 33 an'ny Google Chrome dia nanafoana ny safidy ahafahantsika mamerina ny endrika taloha an'ny New Tab.
Zahao hoe iza no mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi misy Fing for Android anao
Fing for Android dia fitaovana matanjaka hitantanana ny tambajotra WiFi anao ary hahafantatra haingana izay mifandray aminy.
Hihaona amin'ireo safidy 6 maimaim-poana amin'ny WhatsApp
Jereo ny fomba hafa amin'ny WhatsApp, raha tsy tianao ny tompony vaovao, Facebook.
Opera Max dia nandao ny beta ary efa hita ao amin'ny Play Store
Opera Max dia mikendry ny hamonjy antsika saika 50% amin'ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny horonan-tsary, sary ary lahatsoratra amin'ny rindranasa izay tsy mampiasa ireo angona voarindra.
Sintomy ny Lenovo Super Camera 3.5.6, ny fampiharana fakantsary tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Avelako ianao hisintona mivantana ny kinova farany an'ny rindrambaiko Lenovo Super Camera, izay mety ho fakan-tsary tsara indrindra ho an'ny Android
WhatsApp for Android izao dia mamela anao hanafina ny fotoana ifandraisana farany
Ny fahafaha-manafina ny fotoana fifandraisana farany, ary koa ny sary na ny satan'ny, dia hita ao amin'ny WhatsApp for Android izao.
Vakio ny tantara an-tsary tianao indrindra amin'ireo fampiharana roa maimaim-poana ho an'ny Android ireo
ComicRack sy Perfect Viewer dia fampiharana roa mamaky ny tantara an-tsary ankafizinao amin'ny tablette na smartphone anao.
Candy Crush Saga dia manomana ny fidirana ao amin'ny New York Stock Exchange
Tonga any aminay ny vaovao fa King, tompon'ny Candy Crush Saga, dia mikasa ny handeha ampahibemaso ao amin'ny New York Stock Exchange.
Safidy dimy maimaim-poana amin'ny WhatsApp
WhatsApp dia novidian'ny Facebook tamin'ny vidiny 19000 tapitrisa, ary satria manana ny mpanelingelina azy ny tambajotra sosialy, dia manolotra fomba hafa matotra dimy izahay.
Top 10 fanitarana ho an'ny Muzei Live Wallpaper
Muzei dia Live Wallpaper na sary mihetsika izay miaraka amina fanitarana maro dia mamela anao hanana sary tsara indrindra eo amin'ny birao findainao.
Ahoana ny fomba hizarana atiny amin'ny tambajotra sosialy maro miaraka amin'i Shareboard
Shareboard dia rindranasa iray izay mbola mivoatra tanteraka izay manolotra anay ny fiasan'ny fizarana amin'ireo tambajotra sosialinao rehetra indray mandeha
Ahoana ny fomba fanamboarana ny fanakanana WhatsApp noho ny fanafihana an-tsokosoko
Horonantsary iray izay lasa virus no nanafika ny kaonty WhatsApp izay namokarana azy, nangalatra ireo fifandraisana ary nanakana ny fampiharana. Atoro anao ny fomba hanesorana azy.
Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny takelaka Android misy WiFi fotsiny
Raha manana takelaka Android ianao raha tsy misy fifandraisana finday, izany hoe raha tsy misy 3G, ary te hankafy WhatsApp ihany ianao, dia hasehonay anao ny fomba hanaovana azy amin'ny fampianarana.
App WITS Android: Tokony hiasa saina ve i Shazam?
Manohy ny fivoarany eo amin'ny Google Play ny tontolon'ny mozika ary amin'ity tranga ity dia mahita fifaninanana natolotra ho an'i Shazam: WITS ho an'ny Android izahay.
Inona no nanjary an'i Viber? ny olona voatendry voalohany ho an'ny titre WhatsApp Killer
Viber na dia ao anaty tsy fahalavorariana aza dia miandry ny fotoana mety hanaikitra ny sombintsombin'ny mpanjifa WhatsApp.
Sintomy ny tsimbadika farany an'ny BBM ho an'ny Android 2.0 miaraka amin'ny BBM Voice
Izahay izao dia manana ny kinova 2.0 an'ny BBM vaovao ho an'ny Android miaraka amin'ny BBM Voice azo alaina sy hapetraka avy amin'ny Play Store.
BBM ho an'ny Android dia novaina ho an'ny kinova 2.0 mba hampidirina am-peo antso eo amin'ireo mpampiasa
Ny fanavaozana BBM vaovao ho an'ny Android, fantatra amin'ny anarana hoe BBM 2.0, dia efa ho tonga amin'ny Play Store.
Mandahatra ny hiranao ankafizinao amin'ny finday samihafa i Chorus
Chorus dia mamela antsika hamorona teboka WiFi ahafahantsika mampifandray fitaovana finday marobe mba ahafahan'ny hira na ny lisitry ny playlist hilalao amin'ny fotoana iray.
Tadidinao ve ny Facebook Home?, Alias ​​Facebook Home Launcher, tranokala Facebook nohatsaraina kokoa
Alias ​​Facebook Home Launcher dia mpandefa Android izay misy fitoviana amin'ny Facebook Home nefa tsy misy ny tsy fahampiana misy.
Fampiharana Android ho an'ireo zokinay, androany Masil Home Simple Launcher
Masil Home Simple Launcher dia mpandefa rindrambaiko Android natao manokana ho an'ny be antitra na sembana amin'ny fahitana.
Root misy Xperia amin'ny VRoot
VRoot manodinkodina ny Android ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny tsindry iray.
Widget ilaina ho an'ny Android, Widget ho an'ny kalandrie anio
Androany amin'ny Widgets mahasoa ho an'ny Android dia tiako ny manolotra sy manoro hevitra an'ity Widget desktop tsotra tsotra ity izay misy saingy 100 x 100 no miasa.
Androany amin'ny Android sy ny biby fiompinao, «Miarahaba ny biby fiompy»
Androany izahay dia mifantoka amin'ny rindranasa iray hahitana izay toerana hamelana ny biby fiompy.
Music Inc. dia mahatonga anao ho mpitantana mozika
UK Music dia nanangana lalao fitantanana mifantoka amin'ny fisoloan'ny mpanakanto sy vondrona mozika, Music Inc.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, androany Contakts
Contakts dia rindranasa maimaimpoana tanteraka ho an'ny Android izay hanome ny bokinay finday endrika hafa tanteraka.
Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny safidy hanafoanana ny fampandrenesana ny fifandraisana vaovao sy maro hafa
Telegram dia manana hatsaran-toetra lehibe ary miditra an-tsokosoko amin'ny fiarahamonin'ireo mpampiasa Android izy io, ary rehefa manaraka an'io tsipika io dia mety ho mpifaninana lehibe izany.
Ny fanandramana mozika sy sary nataon'ny vondrona mozika Radiohead antsoina hoe PolyFauna
Hitondra anao any amin'ny tontolon'ny famoronana an'ny vondrona mozika Radiohead i PolyFauna, izay mitondra fanandramana hita maso sy mozika miorina amin'ilay hira "Bloom"
Download Flappy Bird mbola azo atao
Eto izahay dia mamela anao noho ny rohy mivantana XDA Developers hampidina Flappy Bird amin'ny endrika apk hahafahanao mametraka azy amin'ny Android anao amin'ny tanana.
WhatsApp dia hampiseho ny sarin'ny piraofilina amin'ireo mpifandray ao amin'ny fandaharam-potoananay
Vao avy nanao fanavaozana ny WhatsApp izay hanatsara ny fiainam-piainan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fisorohana ny olona tsy hahita ny sarin'ny mombamomba azy.
Inona ireo Mini Browser ho an'ny Android?
Raha tsy iray amin'ireo vaovao farany eny an-tsena ny fitaovanao ary ny zavatra angatahinao amin'ny mpizaha dia ny zavatra tokony hatao, dia tokony ho fantatrao ireo mpizaha Mini ho an'ny Android.
Fitsapana Telegram amin'ny kinova desktop
Eto aho dia asehoko anao amin'ny horonantsary ny endrik'ilay kinova desktop ho an'ny Windows of Telegram, ilay mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo izay resahin'ny tsirairay.
Chrome vs. Opera vs. Firefox: inona no fitety tsara indrindra ho an'ny Android?
Raha mbola tsy azonao antoka hoe iza no finday Android tsara indrindra ho anao, anio ao amin'ny Androidsis dia manome tanana anao izahay miaraka amin'ny torolàlana ho an'ny Chrome vs. Opera vs. Firefox.
Modern Combat 5 dia mahagaga sary mahagaga
Ny trano famokarana herinaratra vaovao an'i Gameloft, Modern Combat 5, dia ho tonga voatsara amin'ny fitaovana Mediatek valo fotony.
Ny launcher Nexus 5 dia nantsoina hoe Google Now Launcher taorian'ny fanavaozana ny Fikarohana Google
Rehefa natomboka ny Nexus 5 dia niseho niaraka tamin'ny mpandefa azy Google Now, izay mbola miavaka ihany.
Misy telegram ho an'ny solo-sainao manokana
Eto ianao dia misy antony iray hafa handehanana amin'ny fampiharana ny fanambarana amin'izao fotoana izao, ary izany dia misy Telegram azo alaina amin'ny kinova desktop.
Raha mpanjifa Movistar ianao dia apetraho izao ny widget manokana an'ny Pinterest
Manomboka anio, widget iray manokana an'ny Pinterest natolotry Movistar ho an'ny mpanjifany no azo apetraka amin'ny findainao.
EverythingMe Launcher, ny Launcher vaovao indrindra ho an'ny Android dia nohavaozina miaraka amin'ny fiasa mahaliana vaovao
EverythingMe Launcher dia iray amin'ireo mpandefa tsara indrindra ho an'ny Android izay nahafaly ahy ny nanandrana ary bebe kokoa ankehitriny miaraka amin'ireo fiasa vaovao tafiditra.
Sintomy ny APK vaovao an'ny Google Play Services miaraka amin'ny fanatsarana ny Play Games sy maro hafa
Google Play Services dia manohy ny diany mitondra fanatsarana vaovao amin'ny rafitray mifandraika amin'ny serivisy Google ho an'ny mpamorona sy mpampiasa.
Sary manokana an'ny fanavaozana Samsung S-Health
Avelanay eto ianao, noho ny Sammobile.com, sary manokana momba ny fanavaozana S-Health vaovao ho an'ny Samsung Galaxy S5.
Sintomy ny APK BBM ofisialy ho an'ny Android amin'ny kinova Gingerbread
Avelanay eto aminao ilay kinova tafaporitsaka an'ny apk BBM tany am-boalohany ho an'ny Android ho an'ny kinova Gingerbread hatramin'ny Honeycomb.
Te hanana WhatsApp maimaimpoana mandrakizay ve ianao?, Avy eo mifamadiho amin'ny Telegram
Eto ianao dia manana andian-valiny amin'ny fanontaniana hoe maninona raha miova avy any WhatsApp mankany Telegram?
Sintomy ny kinova beta vaovao an'ny WhatsApp miaraka amin'ny fanohanan'ny Widgets
Eto ianao dia manana rohy mivantana handefasana ny kinova WhatsApp farany an'ny WhatsApp miaraka amina fampiasa amin'ny widget any amin'ny birao.
Samsung dia manavao ny interface WatchON amin'ny endrika fahita amin'ny Android 4.4 KitKat
Samsung dia manomana ny fomba fandefasana ny Galaxy S5, ary ireo fampiharana koa dia mahazo kinova vaovao toa ity WatchON ity.
Yahoo Weather, fampiharana manaitra amin'ny fizahana ny toetr'andro
Androany aho naniry ny hanolotra ny Yahoo Weather, izay ho an'ny tsiriko manokana dia iray amin'ireo fampiharana toetr'andro tsara indrindra.
Sintomy ny Lenovo Music Player ilay mpilalao mozika Lenovo manaitra
Eto aho avelako anao mivantana ny apk ilay mpilalao mozika mahazatra an'ny terminal Lenovo, Lenovo Music Player ho an'ny Android
Widget Android mahasoa, BobClockD3
Androany aho te-hanolotra iray amin'ireo widgets famantaranandro tsara indrindra azontsika sintonina maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store, ny anarany BobClockD3.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, androany PIE Control
PIE Control dia rindranasa mifototra amin'ny rindranasa ParanoidAndroid ary mendrika ny ho anaty fampiharana tsy mampino ho an'ny Android.
Te hanana BBM for Android amin'ny Android Gingerbread ve ianao?
Eto ianao manana ny fomba hankafizana BBM ho an'ny Android amin'ny kinova Android tsy mifanaraka amin'ny fampiharana.
Te hahafantatra izay ataon'ny zanakao amin'ny fotoana rehetra ve ianao? Manampy anao ny ankizy Tracker
Children Tracker dia fampiharana ho an'ny Android izay hanampy antsika hahafantatra sy hifehezana izay ataon'ny zanatsika amin'ny fotoana rehetra.
Miantso Planner ho planner antso ho an'ny Android
Call Planner dia rindranasa ho an'ireo Android izay manolotra anay hanao automatique fihetsika amin'ny antso an-taroby.
GMobile, ilay Spotify maimaim-poana tanteraka
GMobile dia rindrambaiko mitovy amin'ny Spotify, na dia misy safidy maro aza tafiditra ao ary maimaim-poana izy ireo ary tsy misy doka fanampiny.
Meridian Player Trascend, mozika sy mpilalao horonantsary «off-road»
Meridian Player Trascend dia iray amin'ireo mpilalao audio sy horonantsary tsara indrindra azontsika atao maimaim-poana amin'ny Android.
App2Zip na ny fomba famoronana fanavaozana anao manokana.zip avy amin'ny fiononan'ny Android anao
App2Zip dia rindrambaiko maimaimpoana tanteraka ho an'ny Android izay hamela antsika hamorona ny fanavaozam-baovao.zip
Adobe nandefa ny andianteny 2.0 nohavaozina ny Photoshop Express
Adobe dia nanandrana nanavao ny fampiharana Android antsoina hoe Photoshop Express miaraka amin'ny kinova 2.0 avy tany am-boalohany.
Knock Off asan'ny LG G2 ho an'ny Android AOSP (ROOT) rehetra
Ahoana ny fomba ahafahan'ny LG G2 sy LG Flex Knock Off miaraka amin'ity modely Xposed ity.
Ahenao ny haavon'ny finday miaraka amin'ny Night Mode ka hatramin'ny zero
Ny Mode Night dia mampihena ny haavon'ny telefaona ambanin'ny haavon'ny apetraky ny rafitra hanampy anao amin'ny toe-javatra sasany.
Fizarana Web, ny fomba famindrana rakitra eo anelanelan'ny solo-sainao sy Android amin'ny alàlan'ny Wifi
Eto ambany aho manazava ny fomba hidirana amin'ny kinova farany ho an'ny beta testers amin'ny Web Sharing.
Calcu, calculatera farafahakeliny sy mahery fiasa ho an'ny Android
Calcu dia calculatera maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay hananantsika safidy fikajiana mandroso sy endrika kanto sy minimalista.
Xperia Z1, ampidino ny fampiharana Launcher miampy Widgets hametrahana amin'ny Android rehetra
Eto aho dia avelako ianao, misaotra an'i Shan89 avy amin'ny XDA, seranan-tserasera amin'ireo fampiharana teratany an'ny Xperia Z1 hametraka amin'ny terminal misy Android 4.1.2 na avo kokoa.
SnapPea hampifandray mivantana ny sary rehetra amin'ny solosainao
Ampifanaraho amin'ny solo-sainao ireo sary anananao amin'ny findainao Android amin'ny alàlan'ny fampiharana SnapPea.
TeamViewer QuickSupport dia manitatra ny fahazoana lavitra mankany amin'ny telefaona Lenovo, Asus ary Caterpillar.
TeamViewer QuickSupport izao dia manohana ihany koa ny fitaovana Asus, Lenovo ary ny Caterpillar raha tsy mila ROOT.
Sintomy ny Sony's Photo Editor namboarina ho an'ny Android rehetra
Avy eo avelako ho anao ny rohy mivantana hampidinana ny apk an'ny Photo Editor for Android, mahazatra an'ireo terminal Sony's Xperia.
Fampiharana Android mahatalanjona, Androany Beat Cloud & Music Player
Beat Cloud & Music Player dia rindrambaiko mpilalao audio izay manolotra safidy maro azo atao sy safidy azo amboarina.
Apollo Music Player dia mpilalao teratany Cyanogenmod ary efa ananantsika izany amin'ny Android.
Tantano ny fifandraisanao amin'ny bateria fifandraisana Smart+ +++
Fifandraisana mazava +++ bateria dia manampy antsika mandeha ho azy ny fandefasana sy famonoana ireo fifandraisana data ao Android hamonjy ny ain'ny bateria.
Mistery sy vazivazy ao amin'ny Detective Grimoire
Detective Grimoire dia teboka n 'tsindrio sary vetaveta miaraka amina karazana fifangaroana eo amin'ny zava-miafina sy vazivazy.
Fampiharana Android mahatalanjona: Sary manohitra ny halatra ankehitriny
Anti Theft Photo dia fampiharana maimaim-poana avy amin'ny Play Store izay ahafahantsika mahafantatra amin'ny fotoana rehetra hoe iza no mampiasa ny Android.
Sintomy mivantana ny atiny YouTube avy amin'ny Smartphone na Tablet-nao
OGYoouTube dia mod an'ny fampiharana You Tube tany am-boalohany izay nampidirina fiasa toa ny fampidinana mivantana ny atin'ny fantsona.
EA Games dia mandefa rindrambaiko mpiara-miasa Need for Speed ​​Network
Ny filàn'ny haingam-pandeha ho an'ny haingam-pandeha EA dia misy ao amin'ny Play Store ankehitriny aorian'ny Battlefield 4 Commander, mba hanitarana ny zavatra niainan'ny mpampiasa.
BBM ho an'ny Android fampidinana mivantana ny APK farany nohavaozina
Eto ianao manana ny APK ny kinova BBM ho an'ny Android farany ho an'ny fisintomana sy fametrahana mivantana ireo terminal ireo misy olana mahazo izany.
Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android, Androany maraina tsara
My Good Moorning dia iray amin'ireo fampiharana izay, noho ny interface tsara sy ny fiasa vaovao, dia mendrika ny ho ao amin'ny katalaogin'ny fampiharana tsy mampino.
Mianara fiteny amin'ny fampiharana Babbel vaovao
Babbel dia mifantoka amin'ny fampiharana iray amin'ireo taranja telo ambin'ny folo ananany ao amin'ny tranonkalany hianarana fiteny.
Samsung Galaxy Note 3: Ahoana ny fomba hanokafana ny asan'ny Air Commands raha tsy misy ny S-Pen
Misaotra ny GMD Air Commands Shorcout afaka miditra amin'ny safidin'ny Air Commands amin'ny Samsung Galaxy Note 3 sy Galaxy Note 10.1 isika fa tsy mila S-Pen.
Google dia manolotra fampisehoana kely nefa mahaliana hanamarihana ny fifandraisana ho ankafizinao amin'ny fampiharana Gmail mitovy amin'ny findainao.
F1 Challenge, fahazoan-dàlana very maina
Codemasters dia mamoaka lohateny Formula 1 ho an'ny finday, F1 Challenge, izay tsy araka ny nantenaina azy ireo.
Ampiasao toy ny fampandrenesana maivana ny jiro ampiasain'ny fitaovanao
CallFlash dia rindranasa maimaimpoana avy amin'ny Play Store izay hanampy antsika hampiasa ny Flash an'ny terminal anay mba handraisana fampandrenesana maivana.
Rindrambaiko mahatalanjona ho an'ny Android, Androany AllMP3MusicID
AllMP3MusicID dia iray amin'ireo fampiharana ho an'ny Android izay fantatrao fa tsy azonao atao izany raha tsy misy azy.
Launcher Samsung Galaxy Note 3 ho an'ny Android (Clone) rehetra
Ity misy klone mitovy amin'ny Samsung Galaxy Note 3 an'ny Launcher azy manokana ary namboarina ho an'ny Android rehetra.
Ny fanatanjahantena rehetra dia miaina amin'ny Android misy anao miaraka amin'ny Libre Directo, ao anatin'izany ny ligin'ny BBVA, ny amboaran'ny Mpanjaka ary ny ligin'ny Champions
Libre Directo dia rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny Android izay manome antsika fidirana mivantana amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena lehibe eto an-tany.
EvolveSMS dia fampiharana SMS mifantoka amin'ny Android 4.4 Kitkat
Avy amin'ilay mpamorona an'i Talon ihany, dia i EvolveSMS, izay manohy ny asa tsara vita amin'ny Sliding Messaging.
Ny fanavaozana ny tranokala UC Browser dia manavao ny hafainganam-pandeha 15%
Smartphone vaovao 5.5-inch avy any Samsung no tonga tany India hanaovana fitiliana sy fanombanana.
Play Books: ny fomba hijerena ny atiny tsy amin'ny Play Store
Ao amin'ny lesona manaraka dia hampianariko anao ny fomba fampifanarahana ny atiny anao hijerena azy avy amin'ny Google Play Books amin'ny Android anao manokana.
Google+: Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha / manafoana ny fampidirana sy ny fampifanarahana ny sarinao
Fampianarana tsikelikely miaraka amin'ny pikantsary mba ahafahana manafoana ny famerenana mandeha ho azy ao amin'ny Google+
Nabu, ilay smartband Razer
Razer, ilay orinasa solosaina sy peripheral fanta-daza, dia manambara an-dRazer Nabu, ny smartband-ny.
Google mamoaka ny tsipika misy eo amin'ny Google+ sy Gmail
Google dia mandefa fampiasa vaovao hahafahana mandefa mailaka avy amin'ny Google+ mankany Gmail, saingy miaraka amin'ny fepetra tsy hiseho ilay adiresy mailaka.
Sintomy ny sary an-tsary an'i Justin Maller, mpanakanto izay niasa tamin'ny ROM Paranoid Android
Ilay mpanakanto Justin M. Maller dia manana sary mihetsika avo lenta ao amin'ny tranonkalany, izay hitanao ao amin'ny Android ROM Paranoid vaovao miaraka amin'i Halo nohavaozina.
Mandefa Line Whoscall ny Line hamantatra sy hanakanana ny antso an-tariby amin'ny Android
Line Whoscall dia misy ao amin'ny Play Store hamantatra sy hanakanana ireo antso tadiavin'ny mpampiasa ary hizara azy ireo amin'ny namana sy fianakaviana mihitsy aza
Sintomy ny kinova vaovao an'ny Gmail 4.7.2 miaraka amin'ny fampidinana sary mandeha ho azy
Avelanay eto aminao ny kinova farany farany an'ny Gmail amin'ny apk ary soniavin'i Google mora foana.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, androany Gapps Manager
Gapps Manager dia rindranasa maimaimpoana ahafahantsika misintona ny apk mivantana na avy amin'ny Google sy Android Play Store.
Ny fampiharana dimy tsara indrindra ho an'ny takelaka
Ny fampiharana dimy tsara indrindra ho an'ny takelaka izay tsy maintsy napetraka ao amin'ny takelakao.
Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android, Timer-torimaso tsotra izao
Super Simple Sleep Timer dia rindrambaiko maimaimpoana tanteraka izay mamela antsika hamono izay rindran-peo na horonan-tsary aorian'ny ora voatondro.
Sony Xperia Z1, ampidino ny Launcher mety amin'ny Android rehetra
Eto aho dia avelako mivantana ny APK an'ny kinova farany an'ny Xperia Z1 Launcher nalaina mivantana avy tao amin'ny terminal ary natao ho an'ny maodely hafa.
Springfield, ora sy ora maro miaraka amin'ny The Simpsons
Springfield dia iray amin'ireo lohateny "à la Farmville" izay nandresy mihoatra ny maodeliny. Ary, tsy isalasalana, mendrika.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, Androany ara-potoana ny famantaranandro fanairana tsara indrindra ho an'ny Android
Timely dia rindranasa iray izay, noho ny fiasa sy ny toetrany mahatalanjona, dia azo ampidirina ao amin'ny fizarana fampiharana tsy mampino ho an'ny Android
WhatsApp: ny fomba hanafenana ny satananao mba tsy ho hitan'ny mpampifandray anao
Hide-Whatsapp-Status dia fampiharana maimaim-poana sy miasa izay hanampy anay hanafina ny fotoana ifandraisanay amin'ny WhatsApp.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, anio PicsArt Photo Studio
PicsArt Photo Studio dia iray amin'ireo fampiharana fanovana sary tsara indrindra azontsika jerena amin'ny terminal Android.
Manampia fiasa vaovao amin'ny SMSo miaraka amin'ny 8SMS
8SMS dia rindrambaiko maimaimpoana tanteraka ho an'ny Android izay manome antsika fampiasa vaovao ho an'ny SMS sy MMS anao.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, androany Fylee
Fylee dia iray amin'ireo fampiharana izay, noho ny fahatsorany sy ny asany, dia tafiditra ao amin'ny sokajy fampiharana tsy mampino
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, Androany Pushbullet
Pushbullet dia rindrambaiko ho an'ny Android ary fanitarana ho an'ny Chrome na Firefox, izay mamela antsika hifandray eo amin'ny Android sy ny solosaintsika
Huawei Music Player: Sintomy ny rindran-kira mahafinaritra amin'ny terminal Huawei
Huawei Music Player dia mpilalao mozika tsy mampino avy amin'ny marika Huawei izay efa notaterina hametrahana amin'ny terminal Android hafa.
Tutorial-video: Dingana voalohany miaraka amin'i Airdroid
Eto ianao dia manana tutorial-video izay anazavako ny fomba hifandraisana amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny Wifi amin'ny alàlan'ny Airdroid.
Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android, sary mitsingevana anio
Floating Draw dia klone iray amin'ny fampiharana ireo fantson'ny marika LG ary ahafahantsika manao anotations tsara amin'ny Android.
DashClock Widget dia havaozina amin'ny endrika vaovao sy maro hafa
DashClock Widget dia rindrambaiko ahafahanao manampy widget amin'ny efijery hidin-trano ary azo itarina amin'ny fampiasa miaraka amina fampiharana bebe kokoa
Sintomy ny kinova farany an'ny Walkman, ilay fampiharana teratany an'ny Xperia Z1
Eto ianao manana ny kinova farany an'ny Sony Xperia Walkman manan-kery ho an'ny Android 4.0 na avo lenta.
Avenged Sevenfold dia hanana ny lalao video ihany koa
Ny vondrona mavesatra mavesatra Avenged Sevenfold dia hanana ny lalao video: Arahaba ho an'ny Mpanjaka.
Puzzle & Dragons, tranga finday vaovao
Miresaka momba ny Puzzle & Dragons izahay, ilay tranga niseho tamin'ny taona lasa tany Japon.
Savant: fiakarana, fifangaroan'ny dubstep sy retro gothic
Andao hifangaro ny ady gothika amin'ny mozika dubstep avy amin'ny mpamokatra norveziana ary manana Savant: Fiakarana.
Fehezo ny kaloria amin'ny sakafo hohaninao amin'ny Calorie Counter for Android
Calorie Counter dia fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android izay hanampy antsika hanisa ny kaloria amin'ny sakafo nohaninay.
Tehirizo ao amin'ny Karatra SD anao ny lalao Angry Birds
Angry Birds Backup 2SD dia manome antsika ny fampiasa lehibe amin'ny famonjena ny fandrosoantsika amin'ireo lalao Angry Birds dimy mifanentana.
Fampiharana Android mahatalanjona, ArmAmp Music Player
ArmAmp Music Player dia iray amin'ireo fampiharana izay tokony ho ao amin'ny katalaogy tsy mampino ho an'ny Android nomena ny fampiasa lehibe sy ny fanohanan-format marobe.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, Hoy SA Manager
SA Manager dia iray amin'ireo rindranasa tsy mampino ho an'ny Android izay manolotra antsika ny fahaizana manao kopia backup misy fizarana manan-danja toy ny EFS
Ny hira Krismasy malaza indrindra misy amin'ny Android anao
Fampiharana maimaim-poana hihainoana sy hijerena an-tserasera ireo hira Krismasy malaza indrindra avy amin'ny Android anao
Ahoana ny fomba hamoronana Paositra Krismasy mampihomehy
Eto ianao dia manana rindranasa maimaim-poana izay hanampy anay hamorona paositra video Krismasy maimaimpoana.
Motiongraph an'ny Sony Xperia Z1 namboarina ho an'ny Android rehetra
Eto aho avelako ianao noho ny mpampiasa XDA Developers, ny fampiharana Motiongraph rakotry ny Sony Xperia Z1 ary manan-kery ho an'ny Android rehetra.
Ny fampiharana streaming AllCast dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny
Navoakan'i Koush tao amin'ny Play Store ny AllCast. Tsy misy beta intsony ny rindranasa mivantana ary efa misy misintona izao.
Eto aho dia manome anao tutorial-video feno izay hazavako amin'ny fomba fiasan'ny FxGuru
FxGuru dia iray amin'ireo rindranasa izay tsy hita raha tsy ao amin'ny fizarana Incredible Applications ho an'ny Android.
Colossatron, ny farany avy amin'ny Halfbrick Studios, misy ankehitriny
Ireo tovolahy ao amin'ny Halbrick Studios dia namoaka ny Colossatron: Fandrahonana manerantany.
Misintona rakikira vaovao Xperia Z1 5.3.A.0.22 APK
Avelako ianao hisintona anao mivantana sy hametraka ilay rindran-tsary vaovao Photo Album an'ny Sony Xperia Z1
Sarony Sony Select ho an'ny Android rehetra
Eto ianao manana seranan-tsambo Android iray hafa, amin'ity indray mitoraka ity amin'ny fampiharana an'ny Sony manokana sy ny faritra Xperia, Sony Select.
Lego mandefa torolàlana momba ny fanamboarana fiara Lego Technic roa ao amin'ny Play Store
Gaga i Lego tamin'ny fametrahana ny torolàlana momba ny fanamboarana fiara Technic roa ao amin'ny Google Play Store.
Goo Manager beta vaovao misy fanatsarana lehibe
Eto aho avelako anao mivantana ny apk ny kinova beta vaovao an'ny Goo Manager for Android.
Modding Android: efijery fanidiana LG Optimus G ho an'ny Android rehetra
Eto amin'ny Modding Android dia avelako anao ny fomba hametrahana ny efijery fanidiana LG Optimus G amin'ny Android rehetra.
Nahazo ny fanavaozana farany ny Angry Birds Star Wars
Rovio dia namoaka ny fanavaozana farany ny Angry Birds Star Wars, Death Star 2.
WhatsApp dia mahatratra mpampiasa 400 tapitrisa manerantany
WhatsApp no ​​serivisy fandefasan-kafatra an-tserasera malaza indrindra ary ny tarehimarika vaovao mitentina 400 tapitrisa dia manamarina izany